Workflows: Fomba fanao tsara indrindra hanatanterahana ny departemantan'ny marketing ankehitriny | Martech Zone
Alarobia, Septambra 6, 2017 Erik Severinghaus
Amin'ny vanim-potoanan'ny marketing amin'ny atiny, ny fampielezan-kevitra PPC ary ny fampiharana finday, ny fitaovana taloha toy ny penina sy taratasy dia tsy misy toerana eo amin'ny sehatry ny varotra mavitrika ankehitriny. Na izany aza, miverimberina, ireo mpivarotra dia miverina amin'ny fitaovana efa antitra amin'ny fizotrany tena ilaina, mamela ny fampielezan-kevitra mora tohina amin'ny diso sy ny tsy fifankahazoan-kevitra.
fampiharana Automated workflows dia iray amin'ireo fomba hendry indrindra hamongorana ireo tsy fahombiazana ireo. Amin'ny alàlan'ny fitaovana tsara kokoa, ireo mpivarotra dia afaka mamantatra sy manamboatra ny asany miverimberina indrindra, manahirana, manaparitaka ny mety ho lesoka ary mamorona harato fisorohana hisorohana ny rakitra tsy ho very ao anaty boaty. Amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fizotran'asa, ny mpivarotra dia mahazo fotoana be amin'ny herinandro mba handrafetana sy hanaovana fanentanana amin'ny antsipiriany haingana sy mahomby kokoa.
Ny automatisation dia teboka fanombohana tsotra hanosehana ireo hetsika mahazatra, manomboka amin'ny famerenana hevitra momba ny famoronana ka hatramin'ny fankatoavana ny tetibola, amin'ny ho avy. Na izany aza, tsy misy fiovana raha tsy misy ny olana. Ireto no roa amin'ireo teboka mampanaintaina indrindra hitan'ny fikambanana rehefa mandroso amin'ny alàlan'ny automatisation workflow, sy ny fomba ahafahan'ny mpivarotra mivezivezy manodidina azy ireo:
fanabeazana: Mahomby amin'ny fananganana teknolojia mandeha ho azy ny fizotran'ny asa dia miankina amin'ny fananana ny fanohanan'ny sampana feno (na, fandaminana). Ny teknolojia vaovao - ary ny automatisation indrindra - dia niteraka ahiahy momba ny filaminan'ny asa hatramin'ny revolisiona indostrialy. Io tebiteby io, izay matetika tsy avy amin'ny teknolojia fa noho ny tahotra tsotra ny tsy fantatra, dia mety hialana amin'ny fananganana alohan'ny hanombohany akory. Arakaraka ny itarihan'ny mpitarika marketing ny ekipany momba ny sandan'ny automatisation dia ho mora kokoa ny hanamaivanana ny adin-tsaina amin'ny fanovana. , tsy toy ny masinina hisolo ny tsirairay. Ny andraikitry ny automation dia ny manaisotra ireo lahasa asa ambany toy ny rojo lava mailaka mandritra ny fizotry ny fankatoavana. Ny fihetsiketsehana manokana na ny fotoam-pampiofanana dia fomba iray ahafahan'ny mpiasa mahita mivantana ny fomba hanatsarana ny andro fiasan'izy ireo. Ny fikajiana ny fotoana sy ny ezaka ataon'ny mpiasa dia hiantsorohana ny adidy iraisana toy ny famerenana ny fanovana famoronana na ny faneken'ny fifanarahana dia manome ny mpivarotra fahitana mazava kokoa ny amin'ny fiantraikan'ny haitao amin'ny andavanandrony.
Fa ny fanabeazana dia tsy afaka mifarana amin'ny fivoriana na fiofanana mandritra ny antsasak'adiny. Ny famelana ny mpampiasa hianatra amin'ny hafainganam-pandehan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fotoam-pampianarana iray sy loharanom-pahalalana an-tserasera manome hery ny mpivarotra handray andraikitra amin'ny fizotran'ny fananganana. Amin'izany fanamarihana izany, ny mpivarotra dia tokony hiditra akaiky rehefa mampivelatra ireo loharano ireo. Na dia avy any ambony ambony aza ny fanapaha-kevitra hiditra nomerika ary ny sampan-draharahan'ny IT no mety hampivelatra ny fizotran'asa, ho fantatry ny mpivarotra amin'ny farany ny tranga fampiasana azy ireo ary ny filan'ny tetikasa no ilaina indrindra. Ny famoronana fitaovam-pianarana mifanaraka amin'ny hetsika manokana an'ny departemanta marketing fa tsy ny jargon IT dia manome ny mpampiasa farany ny antony hampiasa vola bebe kokoa amin'ny ezaka fananganana.
Fomba voafaritra: Ny lalàna "fako miditra, mivoaka" dia mihatra tanteraka amin'ny automatisation workflow. Ny fanamboarana dingana iray tapaka na tsy voafaritra tsara dia tsy hamaha ilay olana fototra. Alohan'ny hametrahana nomerika ny alàlan'ny workflows, ny departemanta marketing dia tokony ho afaka manamboatra ny fizotrany mba hahazoana antoka fa ny lahasa voalohany dia mitarika ny hetsika manaraka azy. Na dia takatry ny ankamaroan'ny orinasa aza ny fivezivezeny amin'ny ankapobeny, ireo dingana ireo dia mazàna dia misy dingana kely toa tsy dia raisina ary adino matetika mandritra ny tetezamita dizitaly. mifindra amin'ny dingana fanontana. Na izany aza, ny dingana vita mankany amin'ny fisoratana anarana sy ireo antoko tafiditra amin'ny fizotry ny fanitsiana dia mety samy hafa be amin'ny sampana maro. Raha afaka manazava ny fizarana tokana isaky ny lahasa ny mpivarotra dia dingana tsotra ny fametrahana workflow.
Ny fampandehanana automatique ny fizotry ny asa rehetra dia mitaky fahatakarana lalina ny dingana, ny olona ary ny fitondrana mifandraika amin'ny fisorohana ny tsy mazava izay mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny vokatra farany. Rehefa apetraka ny teknolojia momba ny workflow dia tokony ho manakiana ny fahombiazan'ny fizotran'ny mandeha ho azy ny mpivarotra raha oharina amin'ny mpiara-miasa aminy. Amin'ny toe-javatra misy ny tranga tsara indrindra, ny automatisation workflow dia ezaka miverimberina izay manampy ny departemantan'ny marketing hihatsara hatrany.
Fahafahana tsy manam-petra
Ny fametrahana ny dalambe mandeha ho azy dia mety ho fiandohan'ny tetezamita nomerika lehibe kokoa ao amin'ny toeram-piasana. Matetika ny sampan-draharahan'ny marketing dia takalon'aina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny asa miadana sy tsy mahomby ary mamela fotoana kely kokoa ho an'ny drafitra sy ny fampiharana fampielezan-kevitra. Ny automatisation, rehefa kasaina tsara sy ampiharina miaraka amin'ny fahalalana feno ireo fanamby mety hitranga, dia dingana iray mankany amin'ny lalana marina. Raha vantany vao tafapetraka ny onjam-piasa ary mandeha tsara dia afaka manomboka mankafy ny fitomboan'ny famokarana sy ny fiaraha-miasa ny mpivarotra izay miaraka amin'ny onjam-peo mandeha ho azy voafaritra.
SpringCM Workflow Designer manome traikefa maoderina ho an'ny mpampiasa mba hametrahana onjam-piasa ho an'ireo hetsika natao tamin'ny fisie, lahatahiry, na koa avy amin'ireo rafitra ivelany toa ny Salesforce. Ataovy mandeha ho azy ny asa fitantanan-draharaha, alaivo ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny fanontana Ohatra, azonao atao ny mamorona fitsipika hitodihana mandeha ho azy ny antontan-taratasy tsirairay na vondron'ireo antontan-taratasy mifandraika amin'ny fampirimana manokana. Na farito ny mari-pamantarana azo zahana sy azo zahana izay mifandrindra amin'ny rafitra fifandraisan'ny mpanjifa (CRM) ary mampifandray azy ireo ho antontan-taratasy sasany hanampiana amin'ny fanarahana sy ny fanaovana tatitra.
Fitsipika maranitra mamela anao hanao dingana mandeha ho azy miaraka amin'ny kaody kely na tsy misy. Mandeha mandeha ho azy ireo fifanarahana na antontan-taratasy amin'ireo olona ao anatiny na ivelan'ny ekipanao. Ny workflows mandroso dia tena ilaina mandritra ny fifanarahana na famoronana antontan-taratasy rehefa afaka mampiasa angon-drakitra efa voafaritra mialoha ianao mba hampihenana ny lesoka ataon'ny olombelona, ​​fanodinana automatique ho fankatoavana, ary kinova nankatoavina arisiva miaraka amina fifandraisana kely amin'ny mpampiasa.
Ny fikarohana marina dia ahafahan'ny mpampiasa manara-maso haingana ny antontan-taratasy iray amin'ny alàlan'ny fikarohana metadata toy ny daty fanombohan'ny fifanarahana na ny anaran'ny mpanjifa. Azonao atao ny mamaritra ny fomba fanomezana marika ny antontan-taratasy mifanaraka amin'ny filan'izy ireo manokana. Ireo tag ireo dia afaka miharoharo amin'ireo CRM hitazonana ireo ekipa mpivarotra hiasa miaraka amin'ny angon-drakitry ny mpanjifa ihany ary afaka ampiakarina hanarahana ny fifanarahana misy fehezan-dalàna tsy voafaritra na ifampiraharahana.
Tags: Automated workflowsCRMfifandraisana amin'ny mpanjifavarotra mavitrikaautomation marketingfivezivezena amin'ny marketingsalesforcefivezivezin'ny mpiasaspringcmteknolojia mandeha ho azy ny fizotran'ny asaworkflows
Erik dia namolavola vokatra vaovao ary nitondra azy ireo tany an-tsena nandritra ny 20 taona, ary niteraka fivoahana an-jatony tapitrisa dolara sy vola azo. Alohan'ny hitondrana paikady at SpringCM, Erik dia mpanorina sy tale jeneralin'ny SimpleRelevance, sehatra fianarana milina ankafizin'ny olona manatsara ny marketing nomerika. Tamin'ny 2015, ny SimpleRelevance dia namidy tamin'i Rise Interactive, izay nitarihan'i Erik ny sehatry ny kaonty momba ny kaonty sy ny personalization.